Khashinyoow Waxaan ku mooday; Waxaad noqotay!!.
Subject: Khashinyoow Waxaan ku mooday; Waxaad noqotay!!. Mon Jul 26, 2010 10:18 pm
Erayada aad kor ku arkeysaan, waxey ka soo yeereen ninkii ay qisadaan ku dhacday. Waxaa dhacay nin ku nool dlka Mareykinka gaar ahaan magaalada Minneapolis, ayaa wuxuu aad u cuni jiray Khaadka.
Maaalin ayey xaaskiisa u soo dirtay in uu u soo iibiyo caano wiilkiisa yar. Markii uu Jaamac xaafada ka soo baxay ayaa waxaa soo wacay nin saaxiibkiis ah oo u sheegay in magaalada la keenay Khaad Fresh ah.
Jaamac wuu iska ilooway sababtii uu aqalkiisa uuga soo baxay. Isagoon ka fiirsan ayuu u cararay xaafadii saaxiibkiisa oo uu u fadhiistay in uu cunno khaadka Freshka ah.
Jaamac ayaa aad iyo aad ugu magaansaday khaadka uu cunaayo iyo sheekooyinka ay sheegaayaan saaxiibadiis. Wuxuu ilaaway in uu ka xeestay xaaskiisa digniin ah in ay aqalka ka burineyso hadii uusan daynin khaadka.
Markii ay saacada ahayd afartii aroornimo ayuu Jaamac soo xusuustay in loo soo diray in uu caano u soo iibiyo wiilkiisa yar. Markaasuu isagoo si xun u mirkhaansan, gogosha ka cararay.
Jaamac aa markuu albaabka aqalkiisa soo hor istaagay, ku arkay bac madoow oo buuxda, bacdaas uu dhowr jeer arkay in loogu soo riday dharkoodi rag badan oo guryahooda laga soo eryay.
Jaamac ayaa bacdii albaabkiisa taalay intuu qaatay ayuu aaday guriga hooyadiis isagoo naxsan. Wuxuu hurdada ka kiciyey hooyadiis isagoo leh caawa dharkeygii ayaa banaanka la ii soo dhigay oo ma aadi karo gurigeygi ee Hooyooy meel aan seexdo I sii.
Jaamac hooyadiis ayaa ku tiri bal bacdaadan madow dhigo closet(kaan). Jaamac wuxuu soo toosay hooyadiisa oo Ashahaadaneyso, oo leh waxaan qurmuun halkuu ka yimid. Jaamac hooyadiis oo yaaban ayaa furtay closet (ka) uu Jaamac dhigtay bacdiisii madooweed.
Waxaa la ogaaday in qurmuunka uu ka yimid bacdii uu lahaa Jaamac dharkeyga ayaa la iigu soo riday. Bacdii madooweed markii la furay ayaa waxaa ka soo baxay qashinkii gurigiisa oo ay xaaskiisa banaanka u soo dhigtay in uu Jaamac soo tuuro. Jaamacna wuxuu u qaatay bacdaas madoow in uu ku jiro dharkiisa oo sida saaxibadiisa oo kale in isagana caawa alaabtiisa loo soo tuuray.
Jaamac ayaa ugu horeeyay dadkii ku qoslay qashinkaas, wuxuuna soo xusuustay qisadii cigaal shidaad, markaasuu bacdii madooweed ku yiri, “Khashinyahoow waxaan ku mooday; Waxaad noqotay, Mise waxaan u noqon doonin”. “Waxaan ku mooday dharkeygi oo la iisoo tuuray; Waxaad noqotay Khashinkii aqalkeyga; Waxaanse u noqondoonin in aan khaad danbe cuno”
Waxaana la soo sheegay in Jaamac khaad uu ugu danbeeyay habeenkaas.
Subject: Re: Khashinyoow Waxaan ku mooday; Waxaad noqotay!!. Mon Aug 23, 2010 5:58 am
kkkkkkkkkkkkkkkkk sxb aniga waxaab i cajabiyo mawduucyadaa subjectugooda mahad sanid tita